कसरी एक प्रभावशाली ब्लगर, वा पत्रकार पिच गर्ने Martech Zone
बिहीबार, अगस्ट 13, 2020 बिहीबार, फेब्रुअरी 25, 2021 Douglas Karr
विगतमा, मैले यस बारेमा लेखेको थिएँ कसरी ब्ल्गर पिच नगर्ने। गाथा जारी रहन्छ जब म अपारहीन सार्वजनिक सम्बन्ध व्यवसायहरूको अन्तहीन प्रवाह प्राप्त गर्दछु जससँग मसँग उनीहरूको ग्राहकको उत्पादनहरू वा सेवाहरू प्रबर्द्धन गर्न आवश्यक जानकारी छैन।
वास्तवमै देखाउन लायकको पिच लिन यसले केहि समय लिएको थियो। मैले एक सामाजिक मिडिया रणनीतिकारको साथ एक ईमेल प्राप्त भयो सुपरकुल क्रिएटिवल। सुपरकुल एक सिर्जनात्मक एजेन्सी हो जसले अनलाइन भिडियो रचनात्मक र उत्पादन, भाइरल मार्केटिंग, भिडियो सिडिंग, एकीकृत सामाजिक मिडिया अभियानहरू, भाइरल भिडियोहरू, ब्रान्डेड मनोरन्जन र वेबिसोडहरूमा विशेषज्ञता राख्दछ। यो अविश्वसनीय ईमेल हो!
उत्कृष्ट ब्लग पिचका सुविधाहरू
पिच थियो व्यक्तिगत। म सामान्यतया कम्बल कट र पेस्ट प्राप्त गर्दछु। म ती पिचहरू तुरून्त मेटाउँछु। यदि तपाईं म को हो भनेर सिक्न सक्नुहुन्न भने मैले तपाईंलाई किन सुन्नु पर्छ?
पिच संक्षिप्त रूपमा मलाई जानकारी बताउँछ धेरै PR मान्छे केवल ईमेल को शरीर मा एक हास्यास्पद प्रेस विज्ञप्ति काट्छ र टाँस्दछ।
पिचले मलाई ए प्रदान गर्दछ उद्धरण मेरो ब्ल्ग पोष्टमा सिधा प्रविष्ट गर्न!
पिचले वास्तविक कथामा लिंक समावेश गर्दछ (र जहाँ म सन्दर्भ र मेरो दर्शकहरूलाई सूचित गर्न सक्छु)।
पिच मलाई भन्छ विभिन्न तरिकाहरू म जानकारी को उपयोग गर्न सक्दछु! यो तब हो जब म आँसुमा भरिएको थिए ... सूँघ। कल्पना गर्नुहोस् ... मेरो समय बचाउन, डार्सीले पहिले नै मैले यस जानकारीमा कसरी कार्य गर्न सक्छु भनेर सोचिसकेको थियो ... र मलाई केहि प्रश्नहरू छ भने उनीसँग सम्पर्क गर्न एउटा नोट थपेकी छ।
पिच प्रदान गर्दछ पृष्ठभूमि विशेषज्ञ मा र किन उनी सुन्न पर्याप्त महत्वपूर्ण छ।
पिच डार्सीको साथ बन्द हुन्छ वास्तविक नाम, शीर्षक, र कम्पनी (जुन म पनि माथि हेर्यो!)
पिचमा एक छ बाहिरिनु! PR मान्छे अक्सर कट र ईमेलहरू आउटलुकबाट बाहिर पठाउँछन् - प्रत्यक्ष CAN - स्प्याम कानून को उल्लंघन.
यो एक निकट उत्तम ईमेल हो ... म यसलाई ठोस बी + दर्जा दिनेछु। हराएको जानकारीको एक मात्र सानो टुक्रा एक लीप हो जुन मलाई लाग्दैन कि धेरै पीआर मानिसहरू लिने ख्याल राख्दछन् - तर यो मेरो श्रोताहरूका लागि प्रासंगिक हुने कारण सुन्न ठूलो कुरा भएको थियो। ईमेलमा साधारण शब्दहरू मनपर्दछ
मैले देखे Martech Zone विगतमा भिडियो र सोशल मिडियाको बारेमा बोलेको छ, त्यसैले मैले सोचेको यो तपाईंको लागि रूचि हो…
टैग: ब्लगर पिचकसरी पिच गर्नेब्ल्गरलाई कसरी पिच गर्नेकसरी एक पत्रकार पिच गर्नेकसरी एक प्रभावकर्ता पिच गर्नेपत्रकार पिचपिचपिच प्रभावकारीसुपरकुल रचनात्मकसुपरकुलक्रिएटिभ
जुन 16, 2011 बिहान 7:44 बजे
यो साझा गर्नुभएकोमा धन्यवाद - साँच्चै रोचक। PR फेंसमा बस्ने व्यक्तिको रूपमा, र म आफैं एक ब्लगरको रूपमा (यद्यपि पिच गर्न पर्याप्त महत्त्वपूर्ण छैन!), यसले काम गर्ने पिचहरूको क्रम देख्न धेरै उपयोगी छ। ठूलो सिक्ने अवसर, त्यसैले धन्यवाद!
एउटा कुराको बारेमा म अचम्मित छु तर बिन्दु5हो। म मेरो दिनको कामको रूपमा एउटा सानो तर प्रभावकारी PR/मार्केटिङ् टोली चलाउँछु, र कहिलेकाहीँ यस प्रकारको पिच प्राप्त गर्छु (र विरलै, तिनीहरूलाई पनि बनाउनुहोस्)।
मैले बनाएको पिचहरूमा, मैले बिन्दु5मा समावेश गरिएको जानकारीको क्रमलाई कहिल्यै समावेश गरेको छैन, किनकि मैले पिच गरेका मानिसहरूले आफैंले यी कुराहरू सोच्न सक्छन् भन्ने मलाई लाग्छ - र म तिनीहरूलाई कसरी भन्न चाहन्न। तिनीहरूको काम गर्न (मानिसहरूले मलाई त्यसो गर्दा म अलि रिसाउँछु)।
जे होस्, तपाईको पोष्टले मलाई त्यो स्थितिमा पुनर्विचार गर्न बाध्य तुल्याइरहेको छ!
यद्यपि म व्यक्तिगतकरणको बारेमा पूर्ण रूपमा सहमत छु - यति महत्त्वपूर्ण विशेष गरी 'आधुनिक' सञ्चार प्रकार्यको हाइपरकनेक्टेड प्रकृतिलाई विचार गर्दै।
त्यसैले, फेरि धन्यवाद!
जुन 16, 2011 मा 12: 41 PM
म यहाँ असहमतिपूर्ण दृष्टिकोण लिन्छु। राजनीतिक भिडियो र राजनीतिक सामाजिक मार्केटिङले तपाई वा मार्केटिङ टेक ब्लगसँग के गर्नुपर्दछ? #1 यो "व्यक्तिगत" होइन भन्ने निश्चित छ कि यसमा तपाईंको नाम छ तर कसले यसलाई पहुँच गर्न सक्दैन र यसलाई इमेलमा स्वत: आयात गर्न सक्छ (मलाई लाग्छ कि तपाइँको एक पूर्व नियोक्ता यसमा राम्रो छ) #5 म अन्तरक्रियाकर्तासँग पूर्ण रूपमा सहमत छैन। त्यो जानकारी मा, तपाइँ तपाइँको दर्शकहरु को लागी जानकारी को उपयोग गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका थाहा हुनुपर्छ तर ट्वीट को लिङ्क एक राम्रो विचार हो। मूलतया केवल किनभने धेरैजसो अन्य PR पिचहरूले यसलाई राम्रो बनाउँदैन, यसले अरू भन्दा कम चिसो बनाउँछ। यो पिच मेरो विचारमा राजनीतिक क्षेत्रमा कसैलाई जाँदा राम्रो हुनेछ।
आफूलाई भाइरलको रूपमा मार्केट गर्ने जो कोहीले पनि मसँग विश्वसनीयता गुमाउँछ (तर सायद त्यो शब्द प्रयोग गर्दा खोजी र आँखाहरू प्राप्त गर्दछ)
जुन 17, 2011 मा 3: 26 PM
राजनीति र मार्केटिङ हातमा छन्, क्रिस। म तर्क गर्छु कि यो मार्केटिंग थियो जसले ओबामालाई कार्यालयमा ल्यायो। उनको आशा र परिवर्तनको ‘अभियान’ मतदाताले खाए । अनुयायीहरू र प्रभावकारीहरूको उनको प्रयोग एकदम अचम्मको थियो, साँच्चै घाँस जरा आन्दोलन। RE: #1, म तपाईंसँग सहमत छु। मेरो बिन्दु यो थियो कि डार्सी वास्तवमा पिच गर्नु अघि हामीलाई जाँच गर्न आएका थिए... धेरै जसो ब्याच र ब्लास्ट PR फर्महरूले गर्दैनन्।
डग, तपाईले कसैलाई कसरी इमेलको लागि अप्ट-आउट लिङ्क सिर्जना गर्न सिफारिस गर्नुहुन्छ जब यो केवल एक व्यक्ति (ब्लगर वा पत्रकार) को लागी लेखिएको छ र त्यो एक व्यक्तिलाई पठाइएको छ र यो ईमेल मार्केटिङ प्लेटफर्ममा सूचीमा जडान छैन?
धेरैजसो वैध PR मान्छेहरूले सामूहिक इमेल पिचहरू पठाउँदैनन् त्यसैले मलाई थाहा छैन कसरी अप्ट-आउट सम्भव हुन्छ। जाहिर छ, यदि कुनै कम्पनीले तपाईलाई यसको मार्केटिङ इमेलहरूमा सदस्यता लिन्छ (तपाईँको अप्ट इन बिना), त्यो फरक कथा हो।
नमस्ते क्यारी! वास्तवमा धेरै कानूनी पीआर व्यक्तिहरूले सामूहिक इमेलहरू पठाउँछन्। धेरै जसो PR प्लेटफर्महरूले तपाईंलाई आफ्ना सबै पत्रकार र ब्लगरहरू चयन गर्न र त्यसपछि पठाउन अनुमति दिन्छ। केहि, जस्तै Meltwater (एक प्रायोजक) को आफ्नो प्लेटफर्ममा सदस्यता रद्द सुविधाहरू छन् तर अरू धेरैजसो गर्दैनन्। यदि तपाइँसँग व्यापार सम्बन्ध छैन भने, तपाइँलाई साँच्चै एउटा कार्यक्रम चाहिन्छ जसले अप्ट-आउट लग गर्नेछ। आउटलुक र जीमेलले यसलाई काट्दैन। मलाई लाग्छ कि एउटा माध्यम भनेको फारमस्ट्याक जस्तो उपकरण प्रयोग गर्नु हो र मानिसहरूलाई फारम भर्नु (वा स्प्रेडसिटमा गुगल फारम)... तर ट्र्याक राख्न गाह्रो छ।